Xiddiga khadka dhexe ee reer Jarmal ee Mesut Ozil ayaa ugu dambayn helay wado uu uga baxo xaalada Arsenal wuxuuna qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda reer Turkey ee Fenerbahce.
Mesut Ozil ayaa laga reebay liiska Arsenal ee Premier League iyo Europa League, kadib markii Mikel Arteta uu ka reebay safka.
Mesut Ozil ayaa heshiis seddex sano iyo bar ah u saxiixay Fenerbahce si bilaash ah, taasoo soo afjari karta walwalka Arsenal ee Arsenal 350 kun oo isbuuc. mushaharkiisa todobaadlaha ah ee Ozil.
Xilli Arsenal ay kujiraan dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran, waxay aad ugu faraxsan yihiin in Ozil uu helay koox ka furan karta mushaarkiisa, maadaama uu horey uga cabsi qabay inuu sii joogo ilaa qandaraaskiisa uu dhacayo bisha June.
Markii uu Ozil si rasmi ah uga tago kooxda, Arsenal waxay xooga saari doontaa bedelka lix ciyaartoy oo ay ku jiraan ciyaartoy qarash gareeya iyo ciyaartoy kale
Waa kuwan lixda ciyaartoy iyo kooxaha ay u ciyaaraan:
1. Emi Buendia – Norwich City – 24 jirkaan ayaa lagu qiimeeyaa ku dhowaad 40 milyan oo ginni, laakiin Arsenal ayaa u adeegsan karta ciyaartoy sida JOe Willock ama Reis Nelson inay ku darto lacag kaash ah si loo yareeyo socodka lacagta.
2. Houssem Aouar – Lyon – Arsenal ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso 22 jirkaan xagaaga, iyadoo kooxda reer France ay soo diiday dalab 32 milyan ah.
3. Emile Smith Rowe – Arsenal = – Arsenal-kii Arsenal oo labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay amaah ku qaatay RB Leipzig iyo Huddersfield Town ayaa si joogto ah u bilaabay kulamadii ugu dambeeyay wuxuuna ciyaaray booska Mesut Ozil.
Julian Brandt – Borussia Dortmund, oo lagu qiimeeyay 22.5 milyan.
Carlos Soler – Wuxuu ku dhashay magaalada Valencia, wuxuu ku fiican yahay gooldhalinta waxaana lagu tilmaamay Lionel Messi iyo Karim Benzema.
6. Miguel Azeez – 18-jirkaan oo dhawaan loo dallacsiiyay kooxdiisii ​​ugu horreysay ee Arsenal kulankii ay Gunners 4-2 kaga adkaatay Europe League ee Dundalk.
axadle 5964 posts